Drafitr’Andriamanitra ho an’ny asan’ny fiangonana: asa fanabeazana
“Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrena; ary ny fahafantarana ny Iray Masina no fahazavan-tsaina” Ohab. 9:10
Ny tanjona marina kendren’ny fanabeazana dia ny hahatonga ny lehilahy sy ny vehivavy ho mendrika ny asa fanompoana, amin’ny alalan’ny fampivelarana sy fampiasana ireo fahaiza-manao rehetra ananany. Tokony hohamafisina isan-taona ny asa eny anivon’ireny sekoly sy toeram-piofanantsika ireny, satria ao amin’izy ireny no tokony hanomanana ny tanorantsika ho mpiasa mahomby, handroso ho amin’ny fanompoana ny Tompo. Miantso ny tanorantsika ny Tompo mba hiditra amin’ireny sekolintsika ireny, ka hahatonga azy faingana ho mendrika ny asa mavitrika. Fohy ny fotoana. Ilaina eny rehetra eny ireo mpiasa ho an’i Kristy. Zava-dehibe ny fampirisihana ireo izay tokony hirotsaka amin’ny ezaka feno hafanam-po ho an’ny Tompo.
Ny Tompo no nanorina ireo sekolintsika, koa raha mirindra araka ny tanjona kendreny ny fitantanana azy ireny, dia ho voaomana haingana hirotsaka amin’ireo sampan’asa samihafa eo amin’ny asa misionera ny tanora. Ho voaofana hiditra eo amin’ny saha izy ireo, ka ny sasany ho misionera mpitsabo, ny sasany tonga mpandresy lahatra ny amin’ny fahamarinana, ny sasany ho tonga evanjelisitra ary ny sasany kosa mpitory filazantsara. Ny sasany indray dia mety ho mpiandraikitra sekolim-piangonana, izay misy ankizy maro hampianarina ireo fitsipika fototry ny fanabeazana. Asa mavesa-danja izany, izay mitaky fahaiza-manao ambony sy fianarana lalina.
I Satana dia miezaka ny hitarika lehilahy sy vehivavy maro hiala amin’ireo fitsipika marina. Ilay fahavalon’ny tsara rehetra, dia maniry ny hahita ny taranak’olombelona ho voaofana amin’ny fomba diso tafahoatra loatra ka hanjary hampiasa ny hery miasa manginan’izy ireo any amin’ny laharan’ny fahadisoana, raha tokonyhampiasa ny talentany ho fitahiana ireo sakaizany. Ary maro amin’ireo izay misora-tena ho isan’ny fiangonana marin’Andriamanitra no ho tafalatsaka eo ambanin’ny fahadisoam-panantenana. Ho voatarika izy ireo hiala amin’ny fahatokiany eo anatrehan’ilay Mpanjakan’ny lanitra.
Ho fiarovana ny tanora manoloana ireo fakam-panahy avy amin’ny fahavalo no antony nanorenana ny sekoly. Eny anivon’izy ireny no azo hamaritana ny tanora ho tena ilaina eo amin’izao fiainana izao sy ho amin’ny fanompoana an’Andriamanitra mandritra ny mandrakizay. Ireo izay manana fijery mifantoka manokana eo amin’ny voninahitr’Andriamanitra dia haniry amin-kafanam-po ny hahatonga ny tenan’izy ireo ho mendrika ny asa fanompoana manokana; satria ny fitiavan’i Kristy dia hahazoana hery miasa mangina mifehy azy ireo. Izany fitiavana izany dia hipariaka mihoatra noho ny hery ara-batana voafetra, ary hamaritra ny taranak’olombelona ho amin’ny adidy araka an’Andriamanitra.